Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo baaq Deg-deg ah u diray Dowladda - Awdinle Online
Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo baaq Deg-deg ah u diray Dowladda
Magaalada Muqdisho ayaa Maanta oo Talaado waxaa kulan ku yeeshay Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah Xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira.
Kulanka u dhexeeyay Guddiga Doorashooyinka Qaranka iyo Xisbiyada Siyaasada ayaa waxaa uu ahaa mid wadatashi ah oo ay yeeshaan labada dhinac,si loo dardar-geliyo wadashaqeynta labada dhinac.
Intaasi ka dib Guddoomiyaha Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka Soomaaliyeed Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey) oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in Guddiga caqabad ay ka heysato dhanka Xafiisyada uu ku shaqeeyo ee ku dhex yaala Xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya.
Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in tan iyo markii la aas-aasay Guddiga Doorashooyinka uu Guddiga raadinyay Xarun oo ku shaqeeyo, isla markaana si isugu mid ah uu Xisbiyada siyaasadda ugu wadashaqeyo.
Sidoo kale Guddoomiye Xaliima ayaa tilmaamtay in xiligaan Guddiga uu soo gaaray meel sare ayna badan yihiin Shaqaalaha u shaqeeysa, isla markaana ay u baahan yihiin Xafiisyo oo loo dhiso.
Guddoomiyaha Guddiga Madax-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Yarey ayaa Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ka dalbatay inay guddiga u dhisaan Guriyo Banaanka ka ah Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee ay ku shaqeyaan gudigooda.
Sidoo kale Xaliimo Ismaaciil ayaa walaac weyn ka muujisey habraaca doorashooyin ee 2020, waxayna mugdi gelisey sida ay u dhici karo doorashada oo aan weli la ogey.
“Ma hubi sida saxda ah oo ay u dhici doonto doorashada 2020 ee xildhibaanada labada aqal iyo tan 2021 tan madaxweynaha, mana hubo qaab iyo sida ay wax u dhici doonaa”
Previous articleTwo Muslim African women have been nominated for the Nobel Peace Prize
Next articleKenya: Muturi, Mccarter Differ on UN Refusal to Designate Al Shabaab Terrorists